Taariikhda - Filter Tech
2002 Sheekadeena Ayaa Bilaabatay
Khibradayada ku aaddan sameynta qeybta balaastigga ah waxay nagu qaadatay safar aan ku galnay sifeynta biyaha la xareeyay. Waxaan bilownay R&D ee tikniyoolajiyada sifeynta biyaha iyo Macaamiil Mareykan ah oo la siiyay kaydadka iyo qaybaha muhiimka ah ee farsamada gacanta.
2008 Wadada Filitaanka Tech
Markii ay sii ballaadhisay ganacsiga sifeynta biyaha, xarunteena waxaa loo raray goob cusub, Tong'an, Xiamen, halka ay maanta taal.
2010 Ku soo Kordhi munaasabada
Suuqa Shiinaha ee sifeynta biyaha ayaa si aad ah u koray, isagoo dhashay dhalashada casriyeynta qeybta ganacsiga sifeynta biyaha. Fursadan, Xiamen Filter Tech Industrial Corporation waxaa loo aasaasay si madax banaan.
Safarkii Caatada Ahaa 2012
Wax ka barashada Nidaamka Waxsoosaarka Toyota (TPS) wuxuu nagu dhiirrigeliyey inaan tallaabo qaadno oo aan horumar ku sameyno ururkeeda. Waxaan guda galineynaa fahamkeeda TPS anagoo socodsiineyna nidaamkeena howlgalka, Nidaamka Soo Saaraha Runner (RPS), si loo wanaajiyo waxtarka.
2015 Dabagal tayo leh
Maalgalinta $ 5 milyan, Filter Tech ayaa bilaabay inuu dhiso wajiga koowaad ee shaybaarka baaritaanka guriga si kor loogu qaado heerarkeena daryeelka biyaha aad cabeyso.
2016 Sanad Sharaf
Bishii Maarso 2016, warshaddii labaad ee kaydadka miiraha ayaa bilaabay inay shaqeyso;
Bishii Abriil 2016, shaybaarka baaritaanka sifeynta biyaha ee gudaha ayaa la adeegsaday;
Bishii Diseembar 2016, Filter Tech ayaa abaal marisay cinwaanka "National High-tech Enterprise".
2017 Bixitaan Cusub
Filter Tech wuxuu noqdaa mid ka mid ah hoosaadyada ay wada leeyihiin shirkadda Runner Group.
2018 Gaaritaanka Dherer Cusub
Shaybaarka tijaabada ah ee guriga ee Filter Tech waxaa aqoonsaday Adeegga Aqoonsiga Qaranka ee Shiinaha ee Qiimeynta Iswaafajinta (CNAS).
Isticmaalayaasha Daaweynta Biyaha, Kaydadka Beddelaha Filterka Biyaha, Nidaamka Osmosis ee Guryaha oo Buuxda, Sifeeyaha Biyaha Gudaha, Sifeeyaha Biyaha Guriga Oo Dhan, Nidaamka Sifeynta Biyaha ee Osmosis ugu Fiican,